Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Safety » Coronavirus nyere ndị njem ụgbọelu Jenụwarị nsogbu
Airlines • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • News • Safety • Akụkọ na -agbasa ozi Switzerland • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Coronavirus na -emetụta arịrịọ ndị njem ụgbọ elu Jenụwarị
“Jenụwarị bụ nanị n'ọnụ nke aisbeg na usoro nke okporo ụzọ metụtara anyị na-ahụ n'ihi na Coronavirus Mgbapụta COVID-19, nyere na isi mgbochi mgbochi njem na China amaliteghị ruo 23 Jenụwarị. Ka o sina dị, ọ ka zuru iji bute ọgbụgba ngwa ngwa anyị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri, "Alexandre de Juniac, Director General na CEO nke IATA, na-ekwu maka ọnụ ọgụgụ ndị njem na Jenụwarị.
Tù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA) kwupụtara ọkwa data njem ụgbọelu zuru ụwa ọnụ maka Jenụwarị 2020 na-egosi na ọchịchọ ahụ (nke a tụrụ na ngụkọta njem njem njem kilomita ma ọ bụ RPK) rịgoro 2.4% ma e jiri ya tụnyere Jenụwarị 2019. Nke a si na 4.6% afọ karịa afọ ọnwa gara aga ma bụrụ mmụba kachasị dị ala kwa ọnwa kemgbe Eprel 2010, n'oge ọgba aghara igwe ojii na-acha ọkụ ọkụ na Europe nke dugara oke mmechi ikuku na nkwụsị ụgbọ elu. Ike ọnwa Jenụwarị (kilomita nke oche dị ma ọ bụ ASKs dị) jiri 1.7% mụbaa. Ihe na-ebu ibu rịgoro pasent 0.6 na 80.3%.
Onu ogugu ndi njem nke onwa abuo riri elu na 2.5% dika onwa mbu nke Jenụwarị 2019, site na onwa mbu nke 3.7%. Ewezuga Latin America, mpaghara niile edere abawanye, ndị ụgbọ elu na-eduga n'Africa na Middle East nke hụrụ ntakịrị mmetụta si na Coronavirus COVID-19 ntiwapụ na Jenụwarị. Ike rịrị 0.9%, na ihe butere ịrị elu pasent 1.2 na 81.1%.
• Asia-Pacific ụgbọ elu 'Jenụwarị okporo ụzọ rịgoro 2.5% ma e jiri ya tụnyere oge afọ gara aga, nke bụ nsonaazụ nwayọ nwayọ kemgbe mmalite nke 2013 yana ọdịda site na mmụba nke 3.9% na Disemba. Ọganihu GDP dị nro n'ọtụtụ akụ na ụba mpaghara bụ nke COVID-19 metụtara na ahịa China mba ọzọ. Ike rịrị elu 3.0% na ihe butere pọdịa pasent 0.4 ruo 81.6%.
• European ụgbọelu hụrụ Jenụwarị ina ịrị dị nnọọ 1.6% kwa afọ, gbadaa site na 2.7% na Disemba. Nsonaazụ GDP na-ebute akụ na ụba na-eduga na akụnụba n'oge 2019 nke anọ na mgbakwunye kagbuo ụgbọ elu metụtara COVID-19 na mbubreyo Jenụwarị. Ike dara na 1.0%, na ihe butere ibu buliri pasent 2.1 ruo 82.7%.
• Middle Eastern ụgbọ elu gwa a 5.4% okporo ụzọ abawanye na Jenụwarị, nke-anọ consecutive ọnwa nke siri ike ina ibu, na-egosipụta ike arụmọrụ si ibu Europe-Middle East na Middle East-Asia ụzọ gasị, nke e-enweghị budata mmetụta site ụzọ kagbuo metụtara Coronavirus COVID -19 n'oge ahụ. Ike mụbara naanị 0.5%, na ihe butere ibu 3.6 pasent isi na 78.3%.
• Ọchịchọ nke ndị na-ebu North America na-achọ mba dị elu bilitere 2.9% ma e jiri ya tụnyere Jenụwarị otu afọ gara aga, nke na-anọchi anya mbelata site na 5.2% uto edere na Disemba, ọ bụ ezie na enweghị nnukwu ụgbọ elu kagburu Asia na Jenụwarị. Ike rịrị 1.6%, na ihe na-ebuwanye ibu site na 1.0 pasent ruo 81.7%.
• Americangbọ elu ndị Latin America nwetara ọdịda 3.7% na-adaba na Jenụwarị ma e jiri ya tụnyere otu ọnwa n'afọ gara aga, nke bụ njọ ka njọ ma e jiri ya tụnyere nkwụsị 1.3% na December. Gbọ njem maka ndị na-ebu Latin America ugbu a adịchaghị ike ruo ọnwa anọ sochiri, na-egosipụta na-aga n'ihu ọgba aghara mmekọrịta ọha na eze na nsogbu akụ na ụba n'ọtụtụ mba na mpaghara ahụ na-enweghị njikọ na COVID-19. Ike dara 4.0% na ihe butere ihe mejupụtara pasent 0.2 ruo 82.7%.
• trafficgbọ elu nke ụgbọ elu Africa rịgoro 5.3% na Jenụwarị, ntakịrị site na 5.1% uto na Disemba. Ike rịrị elu 5.7%, agbanyeghị, na ihe ebupụtara pasent 0.3 ruo 70.5%.
Ọchịchọ maka njem ụlọ gbagoro 2.3% na Jenụwarị ma e jiri ya tụnyere Jenụwarị 2019, dị ka uto siri ike na US nyeere aka belata mmetụta ọ na-ada site na ịrị elu dị elu nke okporo ụzọ ụlọ nke China. Ike bilitere 3.0% na ihe butere tinye 0.5 pasent ruo 78.9%.
• domesticgbọ njem ụgbọ elu ndị China na-ada na 6.8% na Jenụwarị, na-egosipụta mmetụta nke nkwụsị ụgbọ elu na mgbochi njem metụtara Coronavirus COVID-19. Ministry of Transport nke China kwuru na ọdịda 80% kwa afọ na mpịakọta na mbubreyo Jenụwarị na mbido February. Ike weghaara 0.2% na ihe ebu ndị njem tinye 5.4 pasent isi na 76.7%.
• airgbọ elu US hụrụ na njem ụlọ na-arị elu 7.5% na Jenụwarị. Agbanyeghi na nke a dara site na 10.1% uto na Disemba, ọ na-anọchite ọnwa ọzọ siri ike nke ịrị elu na-egosipụta ntụkwasị obi azụmaahịa nkwado na nsonaazụ akụ na ụba ụlọ n'oge ahụ. Ike rịrị elu 4.9% na ihe butere ịrị elu 1.9 pasent isi na 81.1%.
“Ihe ntiwapụ nke COVID-19 bụ nsogbu zuru ụwa ọnụ nke na-anwale nnagide nke ọ bụghị naanị nke ụlọ ọrụ ụgbọ elu mana akụnụba ụwa. Ndị ụgbọ elu na-enwe ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na-achọsi ike, na n'ọtụtụ ụzọ ụgbọ okporo ígwè daa. A na-adọba ụgbọelu na ndị ọrụ ka ha were ezumike na-akwụghị ụgwọ. N'oge ihe mberede a, gọọmentị kwesịrị ịtụle mmezi nke njikọ njem ụgbọ elu na nzaghachi ha. Nkwusioru nke oghere oghere 80/20, yana enyemaka na ụgwọ ụgbọ elu n'ọdụ ụgbọelu ebe mkpa furu ụzọ abụọ dị mkpa nke nwere ike inye aka hụ na edobere ụgbọ elu iji nye nkwado n'oge nsogbu na n'ikpeazụ na mgbake, "De Juniac kwuru.